आफूभन्दा पाका पुरुषसँग किन बिवाह गर्न चाहान्छन् युवती ? – Khabaarpati
October 30, 2020 goodmamLeaveaComment on आफूभन्दा पाका पुरुषसँग किन बिवाह गर्न चाहान्छन् युवती ?
हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला त खोज्छन नै महिलाहरु पनि आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । केहि पहिला गरिएको एक अध्ययनले पति यस्तो देखाएको छ
किन पाको पुरूष रोज्छन् त महिला ?
केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरुष खोज्नुका धेरै कारण छन् । यसमा मुख्य कारण हो सुरक्षा । पाको उमेरका पुरुषहरु आर्थिकरुपले पनि बलिया हुन्छन् भन्ने विश्वास हुन्छ । उनीहरुमा जीवनको अनुभव पनि धेरै हुन्छ । पाको पुरुषसँग महिलाले सुरक्षित महसुस गर्छन् ।
महिलाका भावनात्मक कुरा पाको उमेरका पुरुषले बढी बुझ्छन् भन्ने बुझाइ हुन्छ । महिलाहरुको भावना बुझ्न कम उमेरकाले नसक्ने र उनीहरुलाई तारिफ पनि पाका उमेरका पुरुषले गर्ने हुँदा पाका उमेरका पुरुष चाहिन्छ ।
कम उमेरका पुरुषको तुलनामा पाका उमेरका पुरुषले धो का दिने खतरा कम देख्छन् महिलाहरु । खासगरी कम उमेरका पुरुषहरु चंचल हुने र अन्य केटीहरुलाई हेरि हाल्ने डर महिलामा हुन्छ । उनीहरु चाहन्छन् आफ्नो पति वा प्रेमीले अन्य महिलालाई नहेरोस् ।